चांडी सुसुह, कैंडी सुकह - जावा
ठेगाना: Berjo, Ngargoyoso, करंगनीर रेजिसी
टिकट मूल्य: $ 2
चांडी Sukuh जावा को द्वीप मा स्थित छ। 15 औं शताब्दीमा जटिल जटिल मितिहरूको निर्माण, मुख्य पिरामिड 1437 मा पूरा भएको थियो। एशियाका लागि एक अनोखी मन्दिर, भारतीय शैलीमा बनाइयो, र इन्डोनेशियाको मुख्य रहस्यहरू मध्ये एक माना।
प्रजनन को मन्दिर चंडी Sukuh
मंदिर परिसर XV शताब्दीको बीचमा अनुपलब्ध जावा जंगली जंगलमा निर्माण गरिएको थियो। यसको उचाइ समुद्री सतह900 मिटर हो। मन्दिर नै त्रास्पेजियम हो, माथि बढेर तीन देखि तीन सम्म। तल्लो तहमा ढुङ्गाहरू धकेलिएको गेटहरू छन्, र पहिलो र दोस्रो आकार पूर्ण रूपमा प्रजनन र कामुकतामा आधार-राहतहरू पूरा हुन्छन्। मन्दिरमा प्रवेश गर्नुअघि दुई कछुवाको रूप मा फलामिएको खोल को साथ मा वेदीहरू थिए, जसमा त्यो प्रहार छोड्न सजिलो थियो।
धेरै आधुनिक पर्यटक चांडी सुहीले आफ्नो प्रस्तुतीकरणमा कामुकता को बहुतायतमा छक्क परे। यो नग्न पुरुष र महिलाको संख्या, यौन दृश्यहरू र यौन अङ्गहरूका चित्रहरू जुन मूर्तिहरू, चित्रहरू र आधार-राहतहरू हुन्छन्। यो तयार हुनुपर्छ।
यो प्रजनन को एक मंदिर हो, र यो यो रूप मा यो जाभा को बुझ्यो कि यस रूप मा थियो। प्राय: प्रायः राहतमा तपाईंले लिंगम र योनी देख्न सक्नुहुनेछ - पुरुष र महिला मूलको पुरानो प्रतीकहरू, जसबाट नयाँ जीवन लिइन्छ। र यहाँ सबैभन्दा लोकप्रिय आधार-राहत गणेश हो, प्रत्येक पक्षमा दुई लोहाको साथ नृत्य।
जावा जंगलमा प्राचीन मेयन पिरामिड
सबै भन्दा पहिला यस पुरातन जटिलता को विशिष्टता यस क्षेत्र को निर्माण मा स्थित मन्दिर को निर्माण मा शामिल हो। इन्डोनेशियामा कहीं पनि तपाईले यो मनपराएका पिरामिडहरू फेला पार्नुहुनेछ। तपाईं तिनीहरूलाई दक्षिणपूर्व एशिया वा यूरोपमा फेला पार्न सक्नुहुन्न, तर उत्तर र मध्य अमेरिकामा तिनीहरूमध्ये धेरै छन्।
चंडी सुक को मन्दिर सूर्य को Mayan पिरामिड को सबै भन्दा समान छ, जो Yucatan प्रायद्वीप र दक्षिण मा पाया जान सक्छ। तर जसमा जावामा भारतीय निर्माण भयो, यो पुरा तरिकाले असंगत छ। यो रहस्य अझै पनि धेरै विद्वान इतिहासकारहरु को दिमाग मा कब्जा र जावा को बहिन को जंगलों को लागि धेरै पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्दछ। विशेष गरी रोचक ती यात्रीहरू जुन पहिले नै ल्याटिन अमेरिकामा हुन्थे र भवनहरूको समानता तुलना गर्न सक्नेछन्।
ट्रंकलेटेड पिरामिडको माथि धेरै खडा छ, जो चढ्न गाह्रो छ, तर शीर्षमा तपाइँ सानो पार्क र टाढाको जङ्गलको सुन्दर दृश्य हुनेछ।
चंडी सुह कसरी प्राप्त गर्ने?
मन्दिर जावा द्वीप को पुग्ने योग्य स्थान मा माउला लावा को ढलहरुमा स्थित छ। निकटतम शहर सुरकार्ता (वा सोलो, स्थानीयहरु को अनुसार)। यो परिसरबाट 40 किलोमिटर हुन्छ। जकार्ताबाट त्यहाँ त्यहाँ रेलहरू र बसहरू छन्। शहरमा, तपाईले अर्को बसमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ, टर्मिनल टिर्टनदी वा पलुरबाट टर्मिनल करङ्ग पाण्डनबाट फर्कनु, रेलको लागत $ 0.75 हो। अर्को ठाउँमा तपाईलाई स्थानमा पुग्नु आवश्यक छ - अन्तिम2किलोमिटर अगाडी बढ्दै जानुहोस्। तिनीहरू पैदल मा जान सकिन्छ वा एक mototax लिन्छन्। सबैभन्दा सुविधाजनक विकल्प, जुन धेरै पर्यटकहरू मनपर्छ, सूर्यकार्ताबाट टाक्सी सवारी हो। यो गर्न को लागि, तपाईं चालक संग बातचीत गर्न हुनेछ ताकि तपाईं मन्दिर परिसर निरीक्षण गर्दा उहाँले तपाईंलाई पर्खनुहुनेछ।
Duspatalin - प्रयोगको लागि संकेत
चश्मा डाई - स्टाइलिश सूर्य संरक्षण सामान फैशन प्रवृत्तिका बारेमा
किन बेरी उपयोगी छ?
पनी पनी पनी मा कार्प - पाक माछा को लागि सबै भन्दा राम्रो व्यञ्जनहरु
साबुन बबल जनरेटर
गर्भावस्थाको हप्तामा पेट को परिमाण
पूर्व प्रेमी हेभीड क्लमले आफ्नो छोरीसँग कुराकानी नगर्ने पश्चात्ताप गर्दैनन्
गर्भावस्थाको 36 हप्ता - स्ट्रोटो पेट
पुरानो फर्नीचरबाट 26 डिजाइनर गृह वस्तुहरू
Impetigo मा बच्चाहरु
सिबेबायोटिक्स - ड्रग्सको सूची
कस्ता रंगहरू हरियोसँग मिश्रण गर्छन्?
संकीर्ण गलियारेहरूको लागि हलवे
तलको बनाइएको हुडको साथ तल जैकेट
आँखामा कालो सर्कल
तपेदिका कसरी टेलिभिजन हुन्छ?
ड्यानियल रेडक्लिफले हलिवुडमा उत्पीडनको विषयमा टिप्पणी गरे